उद्योग परिसंघको अध्यक्षमा अग्रवाल चयन « Lokpath
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको नयाँ अध्यक्षमा उद्यमी विष्णुकुमार अग्रवाल चयन भएका छन्।
परिसंघको १८ औं वार्षिक साधारणसभाबाट अग्रवाल परिसंघको अध्यक्ष चयन भएका हुन् । अग्रवाल यसअघि परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए । उनले यसअघि परिसंघ अन्तर्गतको योङ इन्टरप्रेनर फोरमको नेतृत्व गरिसकेका छन् । साथै उनी परिसंघको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति भएर पनि काम गरिसकेका छन् । पूर्व फुटबल खेलाडी समेत रहेका अग्रवाल नेपाल सुपर लिग विजेता काठमाडौं रेजर्स फुटबल क्लबका प्रोमोटर पनि हुन् ।
यसैबीच परिसंघको साधारणभाले ३७ जना राष्ट्रिय परिषद सदस्य चयन गरेकोमा ७ जना उपाध्यक्ष चयन भएका छन् ।
राष्ट्रिय परिषद्मा संस्थापक समूहबाट अमित मोर, रतनलाल केडिया, राहुल कुमार अग्रवाल, सन्दिप कुमार शारडा, वरुण कुमार तोडी, शुलभ अग्रवाल, अमित बेगानी, विकास दुगड, राजेश कुमार अग्रवाल, चन्द्र टण्डन, अनुज अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, दिपक अग्रवाल, सुरज भक्त पौडेल, निर्वाण कुमार चौधरी, बिक्रम सिंघानिया, दिलिप अग्रवाल, शरद कुमार टिबडेवाला, रोहित गुप्ता र आदित्य संघाई लगायत चयन भएको परिसंघले जनाएको छ ।
यसैगरी, प्रतिष्ठानगत तर्फबाट हेमराज ढकाल, निकोलस पाण्डे, वीरेन्द्र राज पाण्डे, वर्षा श्रेष्ठ, लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, गुरुप्रसाद न्यौपाने, राजीवकुमार गुप्ता, राजबहादुर शाह, पम्फा धमला, आशीष गर्ग, द्विराज शर्मा (सिवाकोटी),अशोक शेरचन,ताराप्रसाद पौड्याल र हितेश गोल्छा चयन भएका छन् । त्यस्तै,संस्थागत सदस्य समूहतर्फबाट गोकुल भण्डारी, कृष्णप्रसाद अधिकारी र बसन्तबहादुर चन्द राष्ट्रिय परिषद सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०७८,श्रावण,७,बिहीवार १४:२१
हालसम्म साढे ५ खर्बभन्दा बढी जले झुत्रा र मैला नोट : कसरी गरिन्छ नष्ट ?
काठमाडौं। धार्मिक मान्यताअनुसार नोट जलाउन नपाइने भए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो मान्यता लागू हुँदैन । चल्तीचलनमा रहेका पुराना र झुत्रा
नयाँ नोटको जतन गर्न राष्ट्र बैंकको आग्रह : कसरी गर्ने जतन ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोटको संरक्षण गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । दशैँ नजिकिँदै गर्दा नयाँ नोट फोहोर
कुमारी बैंकले महिलाहरुलाई दियो आत्मरक्षा तालिम
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले आफ्नो २०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा महिला हिंसाको न्यूनीकरण तथा प्रतिकार गर्न देशको विभिन्न स्थानहरुमा महिलाहरुलाई आत्मरक्षासम्बन्धी